गौचन हत्याका मुख्य योजनाकार बस्नेत पक्राउः को हुन् बस्नेत ? - Himalayan Kangaroo
गौचन हत्याका मुख्य योजनाकार बस्नेत पक्राउः को हुन् बस्नेत ?
Posted by Himalayan Kangaroo | १८ मंसिर २०७४, सोमबार ०१:४७ |
काठमाडौं। नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष शरदकुमार गौचनको हत्यामा संलग्न मुख्य योजनाकार समीरमानसिंह बस्नेत पक्राउ परेका छन् ।
काठमाडौं–१३ बाफलका ३४ वर्षीय बस्नेतलाई केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो सिआइबीले शनिबार चितवनको नारायणगढबाट पक्राउ गरेको हो । सिआइबीका प्रमुख डिआइजी पुष्कर कार्कीले बस्नेतकै योजनामा गौचनको हत्या भएको बताए ।
‘गौचन हत्याका मुख्य योजनाकार समीरमानसिंह बस्नेत पक्राउ परेका छन् । अहिलेसम्मको अनुसन्धान हेर्दा उनी नै हत्याका मुख्य योजनाकार हुन् । हत्यामा संलग्न अन्य अभियुक्तको खोजी भइरहेको छ,’ आइतबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा कार्कीले भने ।, यो खबर आजको नयाँ पत्रिकामा छ ।
यसरी पक्राउ परे बस्नेत
प्रहरीले बस्नेतको कमजोरी पक्राउ परेका अन्य अभियुक्तमार्फत लियो । हत्यामा प्रयोग गरिएका प्रविधिबारे जानकारी पनि उनीहरूबाटै प्राप्त गर्यो । पक्राउ परेका अभियुक्तले बस्नेत भारतमै लुकेका जानकारी दिए ।
सामाजिक सञ्जालमार्फत प्रहरीले बस्नेतलाई चितवनसम्म ल्याउन योजना बनायो । योजनाअनुसार नै बस्नेत चितवन आए । चितवन आएकै वेला उनलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको हो । प्रहरीका अनुसार बस्नेत पक्राउ गर्न पाँच लाख भारु अर्थात् आठ लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ ।
समिरमानसिंह बस्नेत काठमाडौं–१३ बाफलका स्थायी बासिन्दा हुन् । उनको शैक्षिक योग्यता ं२ अध्ययन हो । कलेज पढ्दापढ्दै उनी चक्रे मिलन उर्फ मिलन गुरुङसँग निकट भए ।
अध्ययन छोडेर पूर्णकालीन रूपमा चक्रे मिलन समूहमा बसेर आपराधिक काममा सक्रिय बने । चक्रे मिलनसँग विवाद भएपछि उनी कुमार घैँटे समूहमा लागे । घैँटे समूहसँग संलग्न रहेका वेला उनले असुली धन्दा चलाए ।
घैँटे राजनीतिमा लागेपछि उनले घैँटे समूह पनि छाडे र आफ्नै समूह बनाउन तर्फ लागे । आश्रयस्थलका लागि भारतमै बसेका वेला उनको मनोज पुनसँग भेट भयो । मनोजको सक्रियतापछि समूहमा अन्य सदस्य पनि थपिए । र, डनका रूपमा आपराधिक क्षेत्रमा उदाए ।
Previousअब घरबेटीहरुको लागि नयाँ कानुन
Nextआज अन्तिम प्रचार, प्रमुख दलका शीर्ष नेता आफ्नै क्षेत्रमा
इन्डोनेसियामा सुनामी : ज्यान गुमाउनेको संख्या २२२ पुग्यो,फेरि सुनामी आउन सक्ने चेतावनी
९ पुष २०७५, सोमबार ०२:१७
सांसदहरु धमाधम विदेश सयरमा
४ चैत्र २०७३, शुक्रबार ०१:४१
राष्ट्रपतिबाट उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री र सर्वसाधारणले लगाए टीका
१५ आश्विन २०७४, आईतवार ०२:२१
भारतमा रेल दुर्घटना हुँदा २१ को मृत्यु
४ भाद्र २०७४, आईतवार ०२:१६